Emva-Isaga seemuvi oza kubonwa kwiAmazon Prime | Bezzia
USusana godoy | 11/01/2022 14:00 | Iindaba
Ukuba abakavakali baqhelekile kuwe, mhlawumbi uya kufumana indawo yokonwabela enye yeesaga ezinika okuninzi ukuthetha ngazo. Inesihloko esithi 'Emva' kwaye libali elisekelwe kwinoveli yombhali uAnna Todd. Ubudlelwane bolutsha, ukuphoxeka kokuqala, ubuhlobo kunye neengxaki zentsapho zezinye zeendlela ezithintekayo kwibali elifana neli.
Imuvi nganye isekwe kwenye yeencwadi zikaTodd, ukuza kuthi ga ngoku sineefilimu ezintathu kwezine ezizigqibayo. Ukuba ufuna ukwazi okungakumbi malunga nebali elinje, eliqinisekileyo ukuba liya kukutsala, awungekhe uphoswe yiyo yonke into elandelayo kuba ikunika umdla kakhulu. Ngaba uyilungele okanye uyilungele?
1 Asanda:Yonke into iqala apha
2 Emveni: Kwiwaka lamaqhekeza
3 Emva: Lost Souls
Asanda:Yonke into iqala apha
Njengoko sele sixoxile, ukuza kuthi ga ngoku kukho iimuvi ezintathu onokuthi uzibukele kwi-Amazon Prime. Eyokuqala inesihloko 'Emva: Yonke into iqala apha'. Kuyo sifumanisa indlela ukuthandana kolutsha kuninzi lokuthetha. Siza kudibana noTessa Young ophuma endlwini yakhe kuba eqala ekholejini. Uya kwenza abahlobo abatsha, nangona unina engabathandi, akakhathali. Inokuba ngaphantsi njani, inkwenkwe nayo ibonakala ebomini bayo. Kakade ke, xa kubonakala ngathi loo mtsalane ubabambe bobabini, umntu wesithathu uzama ukuvula amehlo akhe ngokumxelela ukuba yonke into yayisekelwe kumdlalo abawenzile ngobusuku obunye. Into ebingachanekanga ngokupheleleyo, kodwa loo nto yenza uTessa atshintshe kakhulu. Nangona yena noHardin banezinto ezininzi ezifanayo kwaye kubonakala ngathi basenokwabelana nabanye. Ke inxalenye yokuqala isibonisa indlela abadibana ngayo, indlela ubudlelwane babo obuvele ngayo kodwa kunye nokuphoxeka kokuqala kunye neengxaki zentsapho.
Emveni: Kwiwaka lamaqhekeza
Njengoko ekhula, amabali amatsha nawo ayatshintsha. Ngoku uTessa uceba ukugxila kwizifundo, kuba yeyona nto ayifunayo nayidinga ngokwenene. Uphinde afumane umsebenzi njenge-intern, lithuba elihle ke lekamva lakhe kwaye akafuni nto imphazamisayo. Nangona ayisoloko ilula njengoko singathanda. Kuba emsebenzini wakhe, uneqabane elimtsalayo, kuba esazi ukuba yinguqulelo ebeya kuyidinga ecaleni kwakhe hayi umntu onjengoHardin. Oku kubonakala kubonakalisa ubuso bayo bubi kwakhona kwaye kukuba xa sele ucinga ukuba uneengxaki ezithile zoyiswa, ziphinda zivele phambi kwakho. Kodwa kuyinyaniso ukuba awukwazi ukulwa nothando, okanye mhlawumbi unako? Ifilimu yesibini kwi-saga onokuthi uyibone kwi-Amazon Prime Kwaye nangona ingakhange ifumane ukuphononongwa okuhle, kubonakala ngathi uluntu lunolunye uluvo.
Emva: Lost Souls
Sifikelele kwimuvi yesithathu, kwaye ukuza kuthi ga ngoku yeyokugqibela esinayo ukuze sikwazi kwiAmazon Prime. Ukusukela ukuba le yakhululwa ngo-2021 kwaye kuya kufuneka silinde kancinane ukuba icandelo lesine lifike. Okwangoku, kubonakala ngathi ubudlelwane bokuhlalisana phakathi kwezi zibini buhamba ukusuka emandleni ukuya emandleni. Kodwa xa kwakubonakala ngathi kuyamanyaniswa njengolwalamano lwabantu abadala, abazali kunye nentsapho yomntu ngamnye wabo bayadlala. Ngoko baya kuqonda ukuba mhlawumbi baya kuba neembono ezichaseneyo zobomi kwakhona kwaye baya kuthandabuza iimvakalelo zabo, kuba kukho iimfihlelo ezininzi eziya kutyhilwa kulo lonke ifilimu. Kodwa kuhlala kungcono ukuba uzibonele ngokwakho kuba inembali eninzi yokuyibuyisela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Iindaba » Emva: I-saga yeemuvi eziza kubonwa kwi-Amazon Prime
Imithambo yokwenza kunye neentsimbi zeqatha